Idolo Lam Libuhlungu Xa Ndiligoba
Idolo Lam Libuhlungu Xa Ndiligoba Ndililungisa Ngaphezulu kwama-25% abantu abadala abahlupheka ngamadolo. Amadolo ethu afumana uxinzelelo olukhulu ngenxa yemisebenzi yethu yemihla ngemihla. Ukuba unengxaki yedolo, mhlawumbi uqaphele ukuba idolo lakho libuhlungu xa ugoba kwaye ulungisa. Jonga ...
Kutheni idolo lam libuhlungu?
Kutheni idolo lam libuhlungu? Intlungu yamadolo yimeko eqhelekileyo phakathi kwabantu bayo yonke iminyaka. Isenokuba sisiphumo sokwenzakala okanye ukonzakala, okanye imeko yezonyango ebangela iintlungu ezingapheliyo emadolweni. Abantu abaninzi banamava okubuza ukuba kutheni idolo lam libuhlungu xa ndihamba? okanye kutheni idolo lam libuhlungu xa ...
Umsebenzi wokhuseleko okhalweni
Luthini ukhuseleko esinqeni？ yintoni indima yokhuselo lwesinqe? Ukukhuselwa esinqeni, njengoko igama lisitsho, kusetyenziselwa ukukhusela isinqe esijikeleze ilaphu. Ukukhuselwa esinqeni kukwabizwa ngokuba sisinqe kunye nesinqe. Okwangoku, lolona khetho lufanelekileyo kuluhlu olubanzi lokuhlala kunye nokuma okude kwabasebenzi ...
I-Belly Fat nayo inokuba mbi kwiBongo yakho
I-Belly fat kudala icingelwa ukuba imbi kakhulu entliziyweni yakho, kodwa ngoku, isifundo esitsha songeza obunye ubungqina kwimbono yokuba inokuba mbi nengqondo yakho. Olu phononongo, oluvela e-United Kingdom, lufumanise ukuba abantu abatyebe kakhulu kwaye benomlinganiselo ophakamileyo we-hip-to-hip (umlinganiso wamafutha esiswini) bane sl ...
Ungayinxiba njani iMask ngokuchanekileyo kwi-COVID-19
Qinisekisa ukuba imaski igubungele impumlo nomlomo Intsholongwane ye-COVID isasazeka ngamathontsi; iyanwenwa xa sikhohlela okanye sithimla okanye sithetha. Idriphu yomntu omnye idluliselwa komnye umntu, utshilo uGqirha Alison Haddock, kunye neBaylor College of Medicine. UGqirha Haddock uthi ubona iimpazamo zemaski. K ...
Izibonelelo ezi-7 zokuSela amanzi kwiSisu esingenanto kusasa
1. Ukuphucula iMetabolism yakho Izifundo zibonise ukuba amanzi okusela esiswini esingenanto anokunceda ukonyusa izinga lokutya emzimbeni ngama-30%. Oku kuthetha ukuba inqanaba lokutshiswa kweekhalori lonyuka phantse kwisinye kwisithathu. Uyazi ukuba kuthetha ntoni oko? -Ukukhawuleza ukunciphisa umzimba! Ukuba umlinganiselo wakho wokutya ...